Best Software foramu kubvira 2004
more ...Yakajeka kumeso
Nyoresa forum yemahara
Sarudza yezita reakaundi (yako subdomain) uye upe yako email kero. Ndokumbira utarise kuti yako yekutanga password password ichaendeswa kune yako email kero. Hatife takakutumira iwe spam kana kushambadza. Kunyangwe zvakadaro, iyo email ine yako yepakutanga Administrator password inogona kunge iri mune spam yako folda.
Pano iwe unogona nyore kugadzira maforamu akasununguka uye ane simba! Gadzira uye gadzira yako Yenharaunda forum pamwe chete mashoma mashoma. Ziva kusununguka kwekutonga uye maficha eforamu yako yemahara. Yedu software foramu iri kugara ichigadziriswa, yekuchengetedza uye yekuchengetedza zvinyorwa zvinoitwa nguva dzose. Nemabasa matsva nekushandurwa isu tine nzeve yakazaruka yezvishuwo. Batsirwa kubva pamakore edu mazhinji eruzivo mukugamuchira internet foramu. Isu tinotarisira kuchengetedza uye kuwanikwa kwemaseva. Kugara kugadzikiswa kwesoftware kunoona kuti nyaya dzekuchengetedza dzinogadziriswa nekukurumidza.
Account Account [A-z uye 0-9]: .fboard.de
Pano iwe unogona nyore kugadzira maforamu akasununguka uye ane simba! Gadzira uye gadzira yako Yenharaunda forum pamwe chete mashoma mashoma. Ziva kusununguka kwekutonga uye maficha eforamu yako yemahara. Yedu software foramu iri kugara ichigadziriswa, yekuchengetedza uye yekuchengetedza zvinyorwa zvinoitwa nguva dzose. Nemabasa matsva nekushandurwa isu tine nzeve yakazaruka yezvishuwo. Batsirwa kubva pamakore edu mazhinji eruzivo mukugamuchira internet foramu. Isu tinotarisira kuchengetedza uye kuwanikwa kwemaseva. Kugara kugadzikiswa kwesoftware kunoona kuti nyaya dzekuchengetedza dzinogadziriswa nekukurumidza. Mazwi ekushandiswa kubva pane anoshanda anoshanda.